बाबुराम पत्नी हिसिलाले रुदै भनिन्- भित्तासँग विवाह गरें ! — Imandarmedia.com
बाबुराम पत्नी हिसिलाले रुदै भनिन्- भित्तासँग विवाह गरें !
उनले अङ्ग्रेजीमै आफ्नो बुबालाई कसरी चिनेको भनेर सोधिन्। राणाविरुद्ध लडेको मान्छे भनेर बाबुरामले थप प्रस्ट पारेपछि बाबुराम र हिसिलाबीच पहिलो भेटमै निकटता बढ्यो। धर्मरत्न स्मृतिग्रन्थमा बाबुरामले ‘मैले नदेखेका धर्मरत्न यमी’ शीर्षकमा हिसिलासँगको पहिलो भेटबारे लेखेका छन्, ‘महिला र पुरुष विद्यार्थी एउटै छात्रावासमा बस्ने र एउटै मेसमा खाना खाने त्यो अनौठो स्कुलको छात्रावासको मेसमा बी. आर्किटेक्चर दोस्रो वर्षमा पढ्ने एकजना नेपाली विद्यार्थीसँग मेरो भेट भएको थियो। १७÷१८ वर्षकी पश्चिमा संस्कृतिमा हुर्केकी जस्ती देखिने एउटी नेपाली युवतीसँग मेरो पहिलो परिचय त्यहीँ भएको थियो।’
धर्मरत्न यमी बितेको ठीक दुई वर्षपछि सन् १९७७ जुलाई÷अगस्टतिर बाबुराम–हिसिलाको पहिलो भेट भएको थियो। त्यही वर्ष बाबुरामले अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी सङ्घको स्थापना गरेका थिए। २०३४÷३५ सालतिर नेपालमा पनि आन्दोलनको वातावरण बन्दै गएको थियो। राजनीति र समाजप्रति खासै वास्ता नभएकी आधुनिक शैलीकी हिसिलालाई बाबुरामले राजनीतिक इतिहास र नेपालको अवस्थाबारे बताउन थालेपछि राजनीतिप्रति चासो बढ्न थाल्यो।
जेएनयूबाट बस चढ्ने ठाउँसम्म पुग्न केही समय लाग्थ्यो। हिसिला फर्किने बेला बाबुराम बस चढाउन गए, जसरी यसअघि पनि जाने गर्थे। बाटोमै हिसिलाले भनिन्, ‘तपाईंको प्रस्ताव मलाई मञ्जुर छ।’ हिसिला सम्झिन्छिन्, ‘उहाँलाई दाइ भन्थेँ। एउटा सम्मानको दृष्टिले हेर्थें। मैले त अपेक्षा नै गरेकी थिइना कि उहाँले त्यसरी प्रेम प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भनेर। आश्चर्यमा परेँ, त्यसैले सोच्ने समय लिएकी थिएँ।’ बाबुरामका तीनवटा कुराले हिसिलालाई प्रस्ताव स्विकार्न बाध्य पारेको रहेछ। भन्छिन्, ‘बाबुरामका ‘¥यासनालिटी’, ‘जेनुइननेस’ र ‘डेमोक्र्याटिक’ प्रवृत्तिले मलाई छोयो। त्यसपछि हुन्छ,
बाबुरामसँग विवाह गरेपछि हिसिला रोएकी थिइन्। परिवारमा कुराकानी गर्ने, सुखदुःखका कुरा साटासाट गर्ने केही गर्दैनथे बाबुराम। उनी बोल्दा पनि कम बोल्ने। हिसिला भन्छिन्, ‘मैले त भित्तासँग विवाह गरेछु भन्ने लाग्यो। म अलि बढी क्रियाकलाप केन्द्रित, बाबुराम पढाइ केन्द्रित। वास्तवमा मुस्कुराउन पनि नजान्ने बाबुराममा मैले नै मुस्कान भरिदिएकी हुँ।’ बाबुरामलाई पढ्न पाए अरू केही नचाहिने। उनको यो बानीले सुरुसुरुमा हिसिला दिक्क हुन्थिन्। जनयुद्धका बेला पनि नेता र कार्यकर्ता टाढाटाढाबाट हिँडेर बाबुरामलाई भेट्न आएका हुन्थे। उनी भने पढिरहेका हुन्थे। हिसिलालाई यो कुरा मन पर्दैनथ्यो। भन्छिन्, ‘पढ्दा उनको अनुहार शान्त देखिन्छ। पत्रपत्रिका र किताब नै बाबुरामका लागि योगा हो।’
तर, उनले थर छान्ने सोचेकी थिइनन्। भन्छिन्, ‘पछि थाहा भयो, अस्मिता सिंह भनेर काठमाडौँबाटै मेरो सर्टिफिकेट बनाइएको रहेछ।’ यमी÷भट्टराई थरबाट उनको पहिचान खुल्ने र एक्ली छोरी मार्फत भूमिगत बाबुराम–हिसिलासम्म प्रहरी पुग्न सक्ने खतरा रहेकाले मानुषीको नाम÷थर दुवै परिवर्तन गरिएको थियो। पार्टीभित्रको नाम भने उनको ‘आस्था’ थियो। प्रवास र माओवादीका पुराना कार्यकर्ता मात्र होइन, घरमा पनि अहिले उनी आस्थाका नामले नै बोलाइन्छिन्।
अन्तरमुखी स्वभावका बाबुरामले छोरीलाई भने बेलाबेलामा जोक÷कथा सुनाएर हँसाउँछन्। ‘गीत गाएको र नाचेको भने कहिल्यै देखेकी छैन,’ मानुषीलाई सम्झना छ, ‘एकोहोरो पाराले ध्यानमग्न भएर पढिरहेका बेला बाबालाई जति नै बोलाए पनि उहाँ सुन्नुहुन्न। एकाग्रता उहाँको खास विशेषता हो।’